ढाड दुख्ने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ ? कपुरको प्रयोगबाट यसरी पाउनुहोस् राहत – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/ढाड दुख्ने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ ? कपुरको प्रयोगबाट यसरी पाउनुहोस् राहत
काठमाडौँ । धेरैको साझा समस्या हो। लामो समयसम्म कुर्सीमा बसेर वा निहुरिएर काम गर्नुपर्नेलाई त यसले झनै सताइरहेको हुन्छ।मांसपेशी, नशा, हड्डी तथा जोर्नीलगायतमा भएको पीडाका कारण ढाडको दुखाइ महसुस हुन्छ। ढाड दुख्ने समस्याबाट पीडित हुँदा काम गर्न निकै कठिनाइ हुन्छ। काममा मन एकत्रित गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले यसको कारण र समाधानबारे सचेत हुनु आवश्यक छ।
यसरी बनाउनु हाेस् मात्र दुइ मिनेट मै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो सेतो हुन्छ